शोभालक्ष्मीको स्मृतिमा परिवारजनले बनाए त्रिवेणीघाटमा १५ लाख लगानीमा प्रतिक्षालय-Nagarikaawaj.com
सामाजिक कार्यमा श्रेष्ठ परिवार
नागरिक आवाज/बुटवल, ३ बैशाख ।
स्व. शोभालक्ष्मी श्रेष्ठको स्मृतिमा परिवारजनले त्रिवेणी घाटमा प्रतिक्षालयको स्थापना गरेका छन् । बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ नवलपरासीको त्रिवेणी घाटमा प्रतिक्षालय स्थापना गरीएको हो । प्रतिक्षालयको सोमबारे औँषिको अवसर पारेर सोमबार उद्घाटन गरीएको हो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मुक्तिनाथ धाम का प्रमुख संरक्षक स्वामी लोकानन्दले आफ्ना आफन्तको सम्झनामा गरिने यस्ता क्रियाकलापले मृतकको आत्माशान्ती हुने बताए ।
करिब १५ लाख लागतमा बनेको उक्त प्रतिक्षालको आयु ६० वर्ष भएको बताउँदै शब जलाउन आउनेहरुको लागी बस्ने स्थानको अभाव भएकोले प्रतिक्षालय निर्माण गरीएको स्व. श्रेष्ठका भाई मुक्ति प्रसाद श्रेष्ठले नागरिक आवाजलाई बताए ।
उनले शब जलाउन आएका ब्यक्तिहरु हावापानीबाट बच्नको लागी प्रतिक्षालय निर्माण गरीएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सोही वडाका पूर्व वडा अध्यक्ष मोतीलाल ढकाल, कृष्ण प्रपन्नाचार्य, पत्रकार आर पि उपाध्याय,नारि जागृतीकी संस्थापक अध्यक्ष बिष्णु काैडिन्य लगायतले बोल्दै यस्तो कार्य अन्य ब्यक्तिहरुले पनि सिक्नुपर्ने बताए ।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ कालिकानगर निवासी बुबा दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ र आमा भगवती देवि श्रेष्ठ तथा भाई– बुहारी, बहिनी–ज्वाईहरु लगायतको उपस्थीति रहेको थियो ।
तस्वीरहरु कपिल ज्ञवाली/नागरिक आवाज ।